I-Broadway Basement Suite kunye neTubhu eshushu! Ukuhlala? 🩴👙🩲
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDenise And Larry
I-Broadway suite yindawo eqaqambileyo, yabucala kwaye enamagumbi amabini okulala angaphantsi. Ibandakanya ukufikelela unyaka wonke kwi-tub eshushu yangaphandle yokuphumla (Akukho maqela!). Indlu ibuyela epakini kwaye ikufuphi nesithili seshishini seBroadway Avenue!
Nceda uqaphele, sijonga uphononongo oludlulileyo kuzo zonke izicelo zokubhukisha, kubaluleke kakhulu ukuba ube neziyakhayo ukuba unomdla wokugcinela iqela laba-3 okanye aba-4.
I-suite inekhitshi evulekileyo kunye negumbi lokuhlala elikhululekile, eliphangaleleyo kwaye lihonjiswe ngokumnandi ngefenitshala entsha.
Indawo yokuhlala ibandakanya ibhedi yecandelo, iTV kunye nentambo, iNetflix, iimuvi zeStarz, umculo weStingray, isidlali seDVD kunye neWireless Internet. Kukho indawo yomlilo yombane / isifudumezi kwigumbi lokuhlala ukuze uthuthuzele unyaka wonke.
Ikhitshi kunye nendawo yokutyela inetafile kunye nekhawuntara yokutyela. Ixhotyiswe ngefriji kunye nesitovu esipheleleyo, i-microwave, i-toaster, i-cookware, i-dinnerware, i-glassware, i-coffee bodum (i-french press), i-kettle, i-tea, iitawuli zeti, iswekile, ityuwa, ipepile kunye neziqholo ezimbalwa. Isepha yezitya, indawo yokubeka izitya, isikrabha kunye neeroli zetawuli yephepha nazo zikhona.
Igumbi lokulala elikhulu linebhedi entsha elingana nekumkanikazi kwaye igumbi lesibini linebhedi ekhululekileyo. Omabini amagumbi enziwe ngeelinen ezintsha, iiduvethi ezishushu, imiqamelo emitsha kunye neengubo ezongezelelweyo.
Igumbi lokuhlambela licocekile kwaye ligcwele iitawuli ezintsha, ukuhlamba izandla, ibhokisi yethishu yobuso kunye nemiqulu eyongezelelweyo yethishu yangasese.
Ibhafu eshushu isebenza kwisixokelelwano samanzi anetyuwa esidala esayo sanitizer. Le nkqubo ithatha iklorin encinci kunebhafu eqhelekileyo ngoko ke kulula eluswini lwethu. Ibhafu eshushu ifumaneka unyaka wonke kwaye isetyenziswa sithi kuphela xa iindwendwe zingayi kuyisebenzisa. Iindwendwe zinokusebenzisa ibhafu eshushu ngasese ngokusazisa ixesha okanye amaxesha ezingathanda ukuyisebenzisa. Isaziso kufuneka sinikwe iiyure ezi-2 okanye ngaphezulu kwangaphambili ukuze siqiniseke ukuba silungile kwaye usivumele ukuba sihloniphe imfihlo yakho. Siza kunyusa ubushushu kuwe, sivavanye umgangatho wamanzi kwaye silungise xa kukho imfuneko. Iiyure ezinokuthi zisetyenziswe ziphakathi kwe-11am kunye ne-11pm. Sincoma iindwendwe zisa iimbadada okanye i-flip flops ukuya ngaphandle kwi-tub eshushu, sinika iitawuli zebhabhu kunye neengubo. Kuyimfuneko ukuba iindwendwe zifumana imiyalelo malunga nendlela yokusebenzisa ibhafu phambi kokuba zingene. Oku kwenzelwa ukuba kube lula, ukonwabela kunye nokuphepha umonakalo kunye neendleko zokulungisa iindwendwe.
Ezinye iindawo eziqhelekileyo zibandakanya eyadi yangasemva, ipatio kunye nebbq. Izixhobo zokuhlamba iimpahla ezisezantsi nazo zabelwana ngazo, sibonelela ngendwendwe nganye yokuhlala ngeepoddi ezi-4 zesepha yokuhlamba xa zifuneka.
I-Suite ibekwe malunga neebhloko ezili-12 ukusuka kwisithili soshishino saseBroadway, ukusuka apho kumbindi wedolophu iSaskatoon ikwelinye icala lomlambo.
Indlu ibuyela ngqo kwindawo entle eluhlaza, ipaki inebala lokudlala, iihupu zebasketball, indlela kunye neebhentshi.
Kwindawo yeBroadway uya kufumana zonke izinto eziluncedo ezibandakanya iindawo zokutyela, iibhari, iivenkile zekofu, iivenkile ezithengisa ukutya, ikhemesti, isikhululo segesi, iivenkile zokutyela kunye neegalari.
Ikwakufuphi ne-8th Street strip kunye ne-Stonebridge apho uya kufumana uninzi lweendawo zokutyela kunye neebhokisi zebhokisi.
Umbuki zindwendwe ngu- Denise And Larry
We enjoy hosting, travelling and outdoor activities. We love living in the beautiful city of Saskatoon! We have hosted on Airbnb in Calgary from 2016-2018 and we’ve had our Saskatoon listing as of 2020.
Khuphela usetyenziso luka-Airbnb efowunini yakho ukuze uthumele kwaye ufumane imiyalezo lula xa useluhambeni!
Sithanda ukuvumela iindwendwe zethu ukuba zibucala kangangoko kwaye siya kunxibelelana neendwendwe kangangoko okanye kancinane njengoko zifuna. Sikhetha ukuhamba umgama kunye neendwendwe kodwa nceda usazise ukuba ungathanda ukuba sinxibe iimaski xa sijongana ubuso ngobuso.
Iindwendwe ziya kuchitha imizuzu emi-5 kunye nababuki zindwendwe ukuba baboniswe indlela ibhafu eshushu kunye nesigqubuthelo esisebenza ngayo phambi kokungena kuyo.
Singathumela umyalezo kwiindwendwe ezihlala ixesha elide emva koko ngobusuku obunye ukuba zingene ukuze siqinisekise ukuba ukuhlala kwazo kuhamba kakuhle. Nceda uzive ukhululekile ukusithumelela umyalezo nangaliphi na ixesha ukuba ufuna uncedo.
Sithanda ukuvumela iindwendwe zethu ukuba zibucala kangango…
UDenise And Larry yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saskatoon